Sida loogu rakibo Anaconda tallaabo tallaabo tallaabo tallaabo tallaabo ah | Laga soo bilaabo Linux
Isaac | | GNU / Linux, Shabakado / Adeeg, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Dad badan oo la shaqeeya Python waxay bilaabeen inay ogaadaan Mashruuca Anaconda. Waa qayb bilaash ah oo furan qaybinta luqadaha Python iyo R. Waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa cilmiga xogta iyo barashada mashiinka. Sidaa darteed, tiro badan oo macluumaad ah ayaa si dhakhso leh loogu falanqeyn karaa falanqaynta.
Waa wax iska caadi ah fudud si loo rakibo, loo ordo loona cusbooneysiiyo, marka lagu daro la jaanqaadida mashaariicda muhiimka u ah Tensorflow. Hagaag, casharkaan, waxaan ku tusi doonaa sida aad u abuuri karto daruur VPS tusaale ah si aad ugu rakibto Anaconda halkaa ...
1 Waa maxay Qaybinta Anaconda?
2 Tilmaamaha Qaybinta Anaconda
3 Waa maxay VPS?
4 Ku rakib Anaconda talaabo talaabo ah
4.1 Abuur koontada Daruuraha oo diyaari barnaamijka VPS
4.2 Ku rakib Anaconda
Waa maxay Qaybinta Anaconda?
Anaconda waa wax aan ka badnayn xarun furan oo furan, oo hoos timaad liisanka BSD, oo ka kooban barnaamijyo taxane ah iyo maktabado loogu talagalay sayniska xogta oo leh luuqadaha barnaamijka sida Python. Qaybinta luqadda barnaamijyada caanka ah waxay u shaqeysaa sidii maamule deegaan, maareeye xirmo waxayna leedahay jaangooyo aad u ballaaran oo boqollaal xirmooyin ah.
Qeybinta Anaconda waxaad ka heli kartaa afar baloog oo aasaasi ah:
Anaconda Navigator (GUI maarayntiisa fudud iyo dareen leh).
Maktabadaha sayniska xogta.
Conda (amarka maamulka CLI)
Dhamaantood si otomaatig ah ayaa loo rakibayaa iyada oo la rakibayo xirmada, sida aan hadhow tusi doono.
Tilmaamaha Qaybinta Anaconda
Qaybinta Anaconda ayaa leh muuqaalada xiisaha leh taas oo ka dhigaysa mid aad muhiim ugu ah dunida falanqaynta xogta. Kuwa ugu caansan waa:
Kuma tiirsana shirkad kasta, maaddaama ay dayactireyso bulshada oo ay tahay il furan, iyo sidoo kale bilaash.
Waa isweydaarsi, sidaa darteed way ka shaqeyn kartaa labada GNU / Linux, macOS iyo Windows labadaba.
Waa wax aad u fudud, in la rakibo lana maareeyo baakadaha iyo jawiga sayniska xogta si fudud oo dhaqso leh.
Qaar badan oo ka mid ah mashaariicda sayniska ayaa adeegsada, markaa waa mid la isku halleyn karo.
Waxay ka kooban tahay qalab waxtar leh si shaqadaada looga dhigo mid fudud, xitaa barashada mashiinka.
Waxay ku habboon tahay daawadayaasha xogta sida Matplotlib, Datashader, Bokeh, Holoviews, iwm.
Maareyn horumarsan oo aad u awood badan, oo leh suurtagalnimada helitaanka ilaha loogu talagalay barashada mashiinka horumarsan.
Wax dhibaato ah kala kulmi maysid ku tiirsanaanta xirmada iyo xakamaynta nooca.
Abuur oo la wadaag dukumiintiyada koodh isku-duwidda tooska ah, isla'egyada, sharraxaadaha, iyo sharraxaadaha.
Waad ku ururin kartaa koodhka ilaha Python mashiin kasta si dhakhso ah u fuliya. Intaa waxaa dheer, waxay fududeyn doontaa qoritaanka algorithms isku dhafan oo isku dhafan.
Waxay taageertaa xisaabinta waxqabadka sare.
Mashruucyada Anaconda waa la qaadi karaa, marka waa lala wadaagi karaa ama la geyn karaa barnaamijo kale.
Waa maxay VPS?
In kasta oo aad ku rakibi karto Qaybta 'Anaconda Distribution' kombuyuutarka caadiga ah, ama adeeggaaga gaarka ah, casharradan waxaan ku tusi doonaa sida loo sameeyo server VPS ah, maaddaama ay leedahay faa'iidooyin taxane ah, sida in meel fog laga maareyn karo dhowr isticmaale, ballaadhin ballaaran, isugeyn, helitaan sare, iyo keyd qiimo badan marka la barbar dhigo xulashada haysashada server kuu gaar ah.
Lacag yar oo rukumo ah, waxaad ku heli kartaa adeeg VPS (Server Private Private Server), taasi waa, server khaas ah oo khaas ah. Xaaladdan oo kale waxaan ugu tiirsanaan doonaa dariiqa daruuriga ah casharka. Sidaa darteed, waa cadaalad in la dhaho VPS-kani asal ahaan waa “qayb” u heellan adiga oo keliya xarunta xogta ee bixiyehan. Dhexdeeda waad ku sameyn kartaa wax alla wixii aad rabto, sida rakibidda server Linux ah iyo barnaamijyo fara badan. Xaaladdan oo kale, waxaannu dooneynaa inaan rakibno Anaconda.
VPS-kan shaqeyn doonaa sidii mashiin kalidiiTaasi waa, iyada oo leh RAM u gaar ah, oo leh meel keyd ah oo ku saabsan SSDs dhakhso leh, oo leh taxane taxane ah oo loo yaqaan 'CPU cores', iyo sidoo kale nidaam hawlgal.
Uma baahnid inaad ka walwasho maareynta qalabka xarunta xogtaada, ama inaad bixiso khidmadaha tamarta ama qadka lagu kaydiyo ee serverka ah, iska daa kharashyada lagama maarmaanka ah...
Rakib anaconda talaabo talaabo ah
Adeegga la doortay, sidaan ka faallooday, ayaa ah Daruuroio, taas oo aan ku abuuri doono tusaale ama VPS oo leh GNU / Linux nidaamka ka hawlgala kaas oo rakibi Anaconda qaab fudud. Habkaas, waxaad ku bilaabi kartaa sayniska xogta leh dammaanadaha uu bixiyo adeeg bixiyahan, maaddaama ay leedahay 24/7 taageero Isbaanish ah haddii ay wax dhacaan, iyo xarunteeda xogtu waxay ku taal Barcelona, ​​sidaa darteed, iyadoo la raacayo sharciyada ilaalinta xogta Yurub. Marka laga fogaado GAFAM / BATX, wax aad ugu dhow waqtiyadan ...
Abuur xisaabta Clouquusin oo diyaarso barnaamijka VPS
Kahor intaanan bilaabin, waxa ugu horeeya ayaa ah marin adeegga Clouding. Waxaad ka heli kartaa degelkeeda rasmiga ah oo aad ka dooran kartaa heerka ku habboon baahiyahaaga. Qiimayaashani way ku kala duwan yihiin xaddiga RAM, keydinta SSD, iyo CPU vCores oo aad ku heli doontid wixii aad u isticmaali lahayd ee VPS-gaaga ah Xitaa haddii aad ubaahantahay wax kabadan waxa qiimayaashani bixiyaan, waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad qaabeeysid adeege khaas ah
Ahaanshaha mashruuc falanqaynta xogta sayniska, waxay noqon laheyd mid xiiso leh haddii aad leedahay tan ugu weyn xisaabinta waxqabadka suurtogal ah, iyo sidoo kale qadar wanaagsan oo RAM ah. In kasta oo haddii aad u isticmaali doontid mashaariic aad u yar, haddana lama huraan ma ahan ...
Markaad isdiiwaangeliso oo aad raacdo talaabooyinka saaxirku, iyo sidoo kale xaqiijinta cinwaanka emaylkaaga, waxaad awoodi doontaa inaad gasho guddigaaga. Taas awgeed, waa inaad soo gal ee daruuraha:
Adigu mar hore ayaad ku jirtaa adeegga, waadna arki doontaa ay guddi gacanta dareen leh. Haddii aad rabto inaad bilowdo sameynta tusaalaha ama server-ka VPS, waa inaad gujisaa Halkan guji si aad u abuurto adeegahaaga ugu horreeya:
Tani waxay kuu keenaysaa adiga shaashadda isku xidhka ee adeegahaaga VPS. Waxa ugu horreeya ee aad arki doonto ayaa ah ikhtiyaarka ah inaad magaca aad rabto ku dhejiso VPS-gaaga. Markaas nooca nidaamka qalliinka aad rabto inaad rakibato. Waad kala dooran kartaa Windows ama Linux, qeybta Linuxna waxaa ku yaal dhowr hawo oo la heli karo. Xaaladdan oo kale waxaan doortay Ubuntu Server 20.04, laakiin waxaad dooran kartaa midka aad doorbideyso:
Markaad dhamayso, hoos ugu deg isla boggaas waxaadna arki doontaa xulashooyin kale oo aad ku xulan karto ilaha qalabka: Awoodda RAM, awoodda kaydinta SSD, ama tirada dhejiyeyaasha CPU ee ay tahay inaad u xilsaarto VPS-kaaga. Maskaxda ku hay inaad u maamuli karto sida aad rabto, xitaa haddii aad rabto inaad abuurto dhowr VPS oo aad u qaybiso iyaga dhexdooda ... Iyo, xusuusnow, waxaad had iyo jeer ku qiyaasi kartaa qorshe sare, haddii aad u baahato.
Waxa kale oo aad haysataa ikhtiyaarro aad ku habayn karto Firewall ama wixii kayd ah. Mabda 'ahaan, muhiim maahan inaad taa taabato, in kasta oo haddii aad leedahay wax doorbid ah inaad amniga hagaajiso, horay u soco. Waxa muhiimka ah ayaa ah sameyso oo magacaw furaha SSH. Waad ku mahadsan tahay, waxaad ka heli kartaa meel fog si aad u maamusho VPS-kaaga adigoon weydiinin lambarkaaga sirta ah markasta.
Dib u eeg in wax walboo hagaagsan yihiin iyo riix Dir. Taasi waxay kuu geyn doontaa shaashad kale oo VPS-kaaga horeyba uga soo muuqday. Xaalad ahaan waxaad arki doontaa inay wali rakibayso oo iskeed isu habaynayso. Laakiin ha walwelin, si dhakhso leh ayaa loo sameeyaa:
Daqiiqado yar gudahood waxaad ku arki doontaa inay dhamaatay oo xaalada mansabku u muuqan doonto sidii Firfircoon. Waqtigaas, waxaad u isticmaali kartaa nidaamkaaga qalliinka inaad ku rakibto waxaad u baahan tahay (xaaladdan Anaconda).
Guji magaca inaad ku dhejisey VPS-kaaga waxayna kuu jiheyn doontaa bog kale oo kooban oo ku saabsan macluumaadka serverka aad ku rakibi doonto Anaconda:
Sidaa awgeed, waxa muhiimka ah ayaa loo yaqaan aagga Sida loo helo serverka. Tani waa meesha macluumaadka aad u baahan tahay marin u hesho ay tahay, IP-ka VPS-ka, sida lambarka sirta ah, adeegsadaha (xididka) ama furaha SSH si aad u soo dejiso.
Laga soo bilaabo dhammaan xogtaas, oo leh Server IP, xididka iyo lambarka sirta ah hadda waad ka heli kartaa meel fog si aad ugu sii wado rakibidda Anaconda ...
Ku rakib Anaconda
Hadda wax walba diyaar bay u yihiin Ku rakibida Anaconda VPS-ka. Taas awgeed, waad booqan kartaa boggooda si aad u aqriso macluumaad dheeri ah oo ku saabsan mashruuca ama aad u hubiso nooca ugu dambeeya ee la heli karo.
Si aad u bilowdo, waa inaad marin uga hel server-kaaga VPS meel fog adigoo adeegsanaya SSH. Habkaas, adoo ka soo jeeda deegaankaaga, waxaad ku rakibi kartaa wax kasta oo aad u baahan tahay serverka. Waxay noqon doontaa mid fudud sida furitaanka garoonkaada iyo teeb garaynta amarka soo socda (xusuusnow inaad ku badasho youripdelserver-kaaga IP-ga VPS-ka ee aad horay ugu aragtay Clouding):
Ayaa ku weydiinaya furaha sirta ah, jar kan Clouding ku tusay oo dhaji. Taasi waxay ku siin doontaa marin. Waxaad arki doontaa in isla markiiba isbadal ku yimid terminal-kaaga, maahan inuu yahay meesha maxaliga ah ee isticmaalahaagu, laakiin hadda waa tii mishiinka fog. Sidaa darteed, dhammaan amarrada aad ku qorto halkaas waxaa lagu fulin doonaa server-ka VPS.
Hada oo aad marin uhesho, waxa xiga ee aad sameyso waa inaad bilowdo soo dejiso oo rakib Anaconda iyadoo la raacayo amarrada soo socda si aad u keento galka ku-meel-gaarka ah oo aad uga hesho nooca laga heli karo keydka rasmiga ah:
Taas ka dib, waxaad heli doontaa Anaconda, kuwan soo socdaa waa hubi daacadnimada ee xogta la soo dejiyey iyadoo la isticmaalayo wadarta SHA-256. Taas awgeed, kaliya socodso amarka soo socda:
Y wuxuu soo celin doonaa xashiish at jeeg baxay.
Hadda waa inaad bilow Anaconda iyadoo amarka soo socda:
Tani waxay kuu geyn doontaa fariin lagaa codsanayo inaad riixdo ENTER oo dhankeedana waxay kuu geyn doontaa heshiiska liisanka Ananconda. Waxaad aadi kartaa dhamaadka adigoo riixaya Intro waxayna ku weydiin doontaa inaad rabto inaad ku jawaabto haa ama maya. Taasi waa, haddii aad aqbasho shuruudaha iyo haddii kale. Ku qor "haa" adigoon xigashooyin lahayn oo taabo ENTER. Waxa xiga ee aad arki doontaa waa:
Tallaabada xigta waa in la doorto goobta rakibaadda. Riix ENTER dariiqa muujinta asalka ah ama gali wado kale hadaad doorbido ... Hada rakibida Anaconda sida oo kale wey bilaaban doontaa. Waxay qaadan doontaa daqiiqado yar.
Goorma hawshu way dhammaatay, waxaad heli doontaa fariin sida tan soo socota, oo muujinaysa inay si guul leh ku dhammaatay:
Nooca haa in la bilaabo conda. Hadda waxay kugu soo celin doontaa jawaabta VPS-kaaga. Waxaad haysataa wax kale oo ka haray ka hor intaadan adeegsan kondhada, taasna waa inaad ku hawlgeliso rakibidda:
Oo hadda waad awoodi kartaa isticmaal konda oo aad bilowdo inaad siiso Anaconda mid waxtar leh ... Tusaale ahaan, waxaad ka arki kartaa caawimaad xagga xulashooyinka ah oo waxaad ku qortaa xirmooyinka la heli karo siday isugu xigaan:
Xitaa dejinta deegaanka Anaconda si isticmaal Python3, tusaale ahaan:
Jawaab y su'aasha aad weydiiso inaad sii wadato oo wixii lagama maarmaan ah lagu rakibo.
Waad sameyn kartaa dhaqaajiso deegaanka cusub si aad u bilawdo shaqo kuna raaxaysato ...
Hadda waxaan haynaa wax walba oo rakibay oo shaqeynaya, waxaad awood u yeelatay inaad xaqiijiso awoodda iyo waxtarka ay VPS martigelinayso ay bixiso sida kan aan kugu tusnay Clouding. Anaconda waa mid ka mid ah noocyada kala duwan ee codsiyada iyo qalabka aad rakibi karto oo aad isticmaali karto. Wax walba kuma soo dhacaan sameynta degello internet ah. Waxaa jira xulashooyin kale oo badan oo aad u isticmaali karto VPS. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah, waxaan ka tagnaa faallo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Shabakado / Adeeg » Sida loo rakibo Anaconda VPS
Kubeflow: Qalabka Barashada Mashiinka ee Kubernetes
Jaamacadda Minnesota ayaa laga mamnuucay horumarinta kernel-ka Linux